China Custom biri ebi Plastic poli Nkiri Roll factory na-emepụta | Hong Bang
HONGBANG kesara nnukwu mma omenala ebipụta mpịakọta ngwaahịa plastic ịse ngwaahịa na ndị ahịa gafee Europe na America ihe karịrị afọ 20. Ọ na-enye a dịgasị iche iche nke a dịgasị iche iche nke a dịgasị iche iche nke ihe mgbochi plastic laminated film. A na-eji imirikiti ngwaahịa ihe nkiri maka ngwa nkwakọ ngwaahịa nri na ndị ọzọ na-aga ngwa pụrụ iche.
Anyị na-enye ihe ngwọta maka ụdị ihe nkiri ihe nkiri dị iche iche. Onu ogugu enwere ike ichota ihe onyonyo anyi di otutu. Ma ị chọrọ nkwakọ ngwaahịa maka ụdị nri gị kpọnwụrụ akpọnwụ, ma ọ bụ maka nri na-ekpo ọkụ ọkụ, anyị nwere ike ịnye gị ezigbo azịza. Anyị na-enwe ike izute ihe ndị kachasị ewu ewu na ihe onwunwe chọrọ maka okpomọkụ, ọkụ, Oxygen na ikuku, mmiri na ntụ ntụ.
Ihe mgbochi anyị na-agụnye CPP, PET, EVOH, PP metalized, foil, TOPP, VMPET. N'ihi na pụrụ iche chọrọ, dị ka akpaghị aka nkwakọ, anyị na-enye super akara na thermoforming fim. Anyị 7 oyi akwa naịlọn / Pee film kemgbe a price ndú na Europe na America ma ọ bụ ihe mgbochi fim na-FDA mma.
Atụmatụ na nhọrọ
Coex na laminated mgbochi mpịakọta
Low njupụta poli mpịakọta
The Roll film bụ kpọmkwem imewe maka akara nke ụlọ ọrụ. Anyị nwere ike ịmebe ihe nkiri ahụ n'ihe ị chọrọ, ọ nwere ike ịbụ ihe eji eme aluminom, ihe nkiri BOPA / NYLON, ihe nkiri ALOX, ihe nkiri SIOX, Polyester, BOPP wdg. .
Anyị na-enye ngwọta maka ụdị ọhịa ihe nkiri ihe nkiri.Gwa anyị ihe ị chọrọ ka anyị ga-egbo mkpa gị niile. Anyị na-adịghị ịzụlite ngwaahịa na-agbalị ka ụgbọala gị kwupụta ha; anyị na-ege ntị na mkpa gị na injinịa ọhụrụ nke ga-edozi nsogbu gị nkwakọ ngwaahịa.
Nke gara aga: Kraft Akwụkwọ Ewepụghị ala akpa
Osote: Omenala E Bipụtara Plastic Film apụta Printing maka Auto mbukota